हामी को हौं ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ५, २०७४ डा. विद्यानाथ कोइराला
प्रकारान्तरमा पश्चिमाले पनि त्यही गरे । उनको लोकतन्त्र त्यही हो । नागरिक समाजको उठान त्यही हो । तर बुझाइको आधार भने फरक रह्यो । पश्चिमाले बुझे, बुझाए कि राजनीति दण्डले चल्छ । परिवार र नागरिक समाज सहमतिमा चल्छ । पूर्वीय चिन्तनले चाहिँ राजनीतिमा चार आधार दियो । सामको आधार । दामको आधार । दण्डको आधार । भेदको आधार । यसरी हेर्दा पूर्वीय चिन्तक फराकिला देखिए । पश्चिमा एकल । प्रकारान्तरले उनले पनि चारै आधार प्रयोग गरे । अमूर्तमा । पूर्व मूर्तमा भेटियो । अहिलेको पूर्व भने छ्यासमिसे छ । प्रश्न यहीं हो– नेपाली नागरिक समाज कसको बोली बोल्छौं ? कसको पृष्ठपोषण गर्छौंं ? पूर्वीय चिन्तनको ? पश्चिमी चिन्तनको ? समष्टिको ? नयाँपनको ? सायद ‘नागरिक समाज’ अगुवाले उत्तर देलान् ।